Niharan-doza ny fizahan-tany any Chili
Home » Toerana fitsangatsanganana » Niharan-doza ny fizahan-tany any Chili
Raha ny fikarohana nataon'ny indostrian'ny fizahan-tany farany teo dia ny korontana tato ho ato Shily nitondra tolotra goavana amin'ny fizahan-tany any amin'ny firenena.
Ny hetsi-panoherana ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny tsy fitoviana ara-tsosialy ary ny fiakarana amin'ny saran-dàlana amin'ny metro an'i Santiago dia nitombo hatramin'ny nanombohany tamin'ny 7 Oktobra lasa teo amin'ny crescendo iray nahatsiravina tamin'ny 18 Oktobra rehefa nisy vondrona voarindra nanimba fatratra ny gara 80 mahery, vokatr'izany dia nakatona ny metro nidina ary ny fe-potoana tsy fahazoana mivoaka nambara tany amin'ny faritra Greater Santiago.
Nanomboka teo dia niitatra tany amin'ny tanàna hafa ny fihetsiketsehana ary ny 25 Oktobra dia nisy Shiliana iray tapitrisa mahery nidina an-dalambe nitaky ny fialan'ny filoham-pirenena. Ny famandrihana sidina 2019 tany Chily talohan'ny fihetsiketsehana ary hatramin'ny 13 Oktobra dia 5.2% no nitombo tamin'ny vanim-potoana nitovy tamin'ny taona 2018 ary tamin'ny herinandro faha-14 ka hatramin'ny 20 Oktobra dia tafakatra 9.4%; na izany aza, ny herinandro manaraka dia nirodana izy ireo, 46.1% nidina. Nitohy izany fironana izany, miaraka amin'ny famandrihana tokony ho 55% hidina isaky ny efatra herinandro manaraka. Tao anatin'izay tapa-bolana lasa izay, izay niavaka tamin'ny fanambaràna drafitra fanarenana ara-toekarena 5.5 tapitrisa dolara nataon'ny Filoham-pirenena nefa nanohy ny fanakorontanana nataon'ny mpanao fihetsiketsehana, dia nihena kely ny fihenan'ny famandrihana. Nandritra ny herinandron'ny 25 nov-1 Des, 36.8% no nilatsaka ary ny herinandro manaraka dia 29.4% no ambany.
Talohan'ny korontana dia tena nahomby tamin'ny fanintonana mpizahatany i Chili noho ny isan'ny fitomboana 5.2% ho an'ny telovolana telo voalohany amin'ny taona. Izany dia satria nisy fidinana tampoka teo amin'ireo mpitsidika avy amin'ny iray amin'ireo tsenan'ny loharano manan-danja indrindra, Arzantina, noho ny fianjeran'ny Peso Arzantina.
Hatramin'ny nanombohan'ny taona 2018, ny sandan'ny peso Arzantina dia mihoatra ny antsasaky ny sandan'ny peso Shiliana, ary ny vokatr'izany dia nihena 31.1% ny fahatongavan'ireo mpitsidika hatramin'ny Janoary 2018 ka hatramin'ny Novambra 2019. Mijery isam-bolana isam-bolana. manoloana ny taona lasa, ny tonga tao Chile avy any Arzantina dia latsaka ambany ambany ny 50% tamin'ny volana septambra 2018 ary nitohy hatramin'ny volana martsa 2019 izany fironana izany, ary nanomboka nihena ny fihenan'ny fihenan'ny asa, na dia nitohy aza ny fihenan'ny.
Talohan'ny fikorontanana dia naminavina ny manam-pahaizana fa ny fihenan'ny famandrihana avy any Arzantina dia hiorina amin'ny faran'ity taona ity; na izany aza, ny toe-draharaha izao dia toa somary pessimistic noho ny toe-draharaha politika tato ho ato sy ny fihenan'ny fahatongavan'ireo tonga tamin'ny Novambra.
Ny kisoa dia nanafika an'i Haifa Israel
Inona avy ireo toerana tsara indrindra amin'ny fankalazana ny Noely 2019 any Etazonia?